Iirokethi ezizenzeleyo -Ikkaro
yokuqalisa >> Iingcaphephe zaseKhaya >> Iirokethi ezizenzeleyo
Sivula icandelo lokuthetha ngehlabathi elitsha, eleerokethi ezenziwe ngabantu.
Ukujonga i-Intanethi ndiye ndafumana iintlobo ezininzi ze imijukujelwa eyenziwe ekhaya, ezininzi zilula kakhulu kwaye zinobuchule; imijukujelwa eyenziwe ngematshisi enamanzi neebhotile zeplastiki kunye nezinye ezintsonkothileyo apho kufuneka ubuchwepheshe obuninzi.
Sinezinto ezininzi ezilula, ezinobuchule esizisebenzisayo ukufundisa abantwana. Ngaba ufuna irokethi eyenziwe ekhaya yabantwana? Kwaye yintoni ehambayo? Kwaye yintoni abanokuyenza (ngolawulo lwakho, ewe, ungaphoswa ziikhonkco zeli candelo.
Ufuna into enzulu ngakumbi ... kulungile, sele sinazo iirokethi zamanzi. Ngaba uyazi ukuba banokufikelela kwiimitha ezingama-500 ukuphakama?
Kukho iirokethi ze-DIY ezingenanto yokumonela komnye wemveliso yezemizi-mveliso. Singafumana indlela yokwenza i-rocket fuel. Izifundo ezinomdla ngokwenene, nangona kufuneka ziphathwe ngononophelo kuba zinokuba yimixholo eyingozi.
Ndiyakuthanda ukuphosa izinto emoyeni kwaye ndiyakuthanda ukwenza i-step-by-step tutorials.
Irokethi kukubonakaliswa kwetekhnoloji ephezulu. Ukubona iiprojekthi ezithandwa ngabantu
Ndicinga ukuba licandelo elilungileyo elinezinto ezininzi zokuhlola ...
Irocket yokutshiza eyenziwe ekhaya
Enye ye iirokethi ezilula kwaye kusebenza kakuhle endikubonileyo, kwaye ndibone abambalwa ;-) Isebenza ngokutshisa uhlobo oluthile lweerosol, into enesidambisi okanye ukutshiza okufanayo, kokukhona kunokutsha ngcono.
Ndiyibekile kuluhlu lwezinto endiza kuzenza. Kodwa ngelixa ndigqiba ukuyenza ndikushiya nevidiyo. Ilula kakhulu. Kwaye nje ukuba senze eyethu, siyayixhoma ngophuculo esilwenzayo ;-)
En Ijelo le-youtube lokujongana notywala, sinokufumana iimvavanyo ezininzi ezenziwa ngotywala.
Oku kulula irocket rocket itsale ingqalelo yam. Kumgca weerokethi ezilula kakhulu ukwenza ezifana nomjukujelwa womdlalo okanye lowo wengxowa yeti. Yimidlalo esinokuyidlala nabantwana bethu, sihlala sibachazela ngeengozi zokusebenzisa umlilo kunye nokuthatha amanyathelo afanelekileyo. Sukwenza nabo ukuba ucinga ukuba bazokuzama xa bebodwa okanye nabahlobo babo. Ubazi ngcono abantwana bakho kunaye wonke umntu.Isibonelelo somsebenzi kukudala umdla, olo thakazelelo, olubenza bafune ukuqhubeka nokufunda nokuzama.
Eli xesha siza kulidinga kuphela
Ukutsha kotywala, uhlobo oluthengisa kwiivenkile eziluhlaza okwesibhakabhaka
Utywala bugalelwa ebhotileni siyikhuphe. Emva koko siyibeka endaweni kwaye sizise ukukhanya kufutshane nomngxunya kwiplagi. Ke intsalela, isixa esincinci sotywala esisele ngaphakathi ezindongeni siyakutshisa sityhale ibhotile.
Ndikushiya iividiyo ezimbalwa.
Irocket enebhegi yeti
Singathi yeyona rokethi ilula ehlabathini. Ufuna kuphela iphepha lengxowa yeti ... Qhubeka nokufunda
Irokhethi eyenzelwe ekhaya enematshisi
Siza kubona iirokethi zomdlalo. Ezi ziirokethi ezilula zokwenza nge ... Qhubeka nokufunda